Fantina sy fintina | NewsMada
Nidina avy hatrany any Toliara, omaly, ny Praiminisitra Mahafaly nampahery ireo niharam-boina noho ilay fanafihan-dahalo tany Beroroha, afakomaly. Nitondra fanampiana ho an’ireo naratra koa ny tenany. Niara-dalana aminy any an-toerana ireo mpikambana vitsivitsy amin’ny governemanta.
Nanao ny fianianany, omaly tetsy Ambohidahy, ireo mpikambana roa natolotry ny Antenimierandoholona ho mpanolotsaina avo momba ny lalàmpanorenana ao amin’ny HCC. Anisan’izany Tiandrazana Jaobe Hilton sy Randriamarosata Maminirina Sahondra. Nivoitra tamin’ny fianianan’izy ireo ny hanatanteraka ary amim-pahamendrehana ny andraikitra atolotra azy ireo ary tsy hiandany, na amin’iza na amin’iza…
Hanome fiofanana ireo tsy an’asa eny ambany tanàna ny masoivohon’i Indonezia. Nanao veloma ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, Ravalomanana Lalao ny ambasadaoro, Artanto Salmoen Wargadinata, handao antsika tsy ho ela. Nivoitra ny hanofanana ireo tanora eo amin’ny voly soja sy ny fanodinana ny tsinkafonkafona ho lasa taozavatra mampidi-bola. « Natao ho an’ireo tsy anasa eny amin’ny faritra iva izany fanofanana izany », hoy ny vahiny.